Khayre iyo Axmed Madoobe oo heshiis hordhac ah gaaray | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Khayre iyo Axmed Madoobe oo heshiis hordhac ah gaaray
Kulan xasaasi ah oo alabaabada u xirnaa ayaa xalay wuxuu magaalada Kismaayo ee Xarunta Maamulka Jubbaland ku dhex maray Axmed Madoobe, Fahad Yaasiin iyo Ra’isul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Kulanka oo ahaa mid aad u kulul ayaa sida aan xogta ku helnay waxaa markii hore si gaar ah u bilaabay Axmed Madoobe iyo Fahad Yaasiin, inkastoo markii dambe lagama maarmaan ay noqotay in lagu soo daro Xasan Cali Kheyre.
Sida ay Caasimadda Online u xaqiijiyeen illo wareedyo ka tirsan Jubbaland , labada dhinac ayaa qodobada ay ka wada hadleyn isku fahmay dhammaan marka laga reebo sida ay noqon doonto doorashada soo socoto taasoo la filayo inay noqoto mid qof iyo cod ah.
Haddaba halkaan hoose ka akhriso liiska Qodobada hordhaca ah oo ay heshay Caasimadda Online:
1) In Axmed Madoobe laga tala-geliyo magaacbista dowladda ee xilalka, islamarkaana uu xusho qeybta uga soo aadeyso Jubbaland.
2) Axmed Madoobe ayaa Dowladda Soomaaliya ka codsaday inay faragelinta ka deyso maamulka Galmudug, si heshiis buuxa looga gaaro khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada, waxayna labada mas’uul sheegeen inay arrintaas aqbaleyn.
3) Labada dhinac ayaa saacado badan isla lafa gurayey ajandaha shirweynaha la filayo inuu dhammaadka bishaan ka dhaco magaalada Garoowe, labada dhinac ayaa isku soo qaaday in wada tashiyo arrintaas lagala sameeyo madaxda kale ee maamulada maadaama qaar ka tirsan maamulada ay gacanta ku heyso dowladda federaalka Soomaaliya.
4) Axmed Madoobe ayaa ku adkeystay inuusan marnaba ka tanaasuli doonin difaaca kursigiisa, wuxuuna dalbaday inaysan dowladda Federaalka faragelin la mid ah middii Koonfur Galbeed ku sameynin tan la filayo inay ka dhacdo Kismaayo.
5) Qodobada laga wada hadlay waxaa ku jiray sida ay noqoneyso Doorashada ka dhici doonto dalka oo la doonayo inay ahaato qof iyo cod, wuxuuna qodobkaas noqday mid aan gebi ahaanba la isku fahmin maadaama uu yahay mid ay adag tahay in go’aan deg deg ah laga qaato.
6) Waxaa jiro qodobo kale oo loo ballamay in wada xaajood kale laga yeesho maadaama aan hal kulan lagu soo wada dhameyn karin qodobada ay isku hayeen dowladda iyo maamul goboleedyada, waxaana suurta-gal ah in Axmed Madoobe uu yimaado Muqdisho